Ejipta: Ny enti-milaza “mi-mubarak” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Aogositra 2011 13:39 GMT
Ny takarivan'ny alakamisy lasa teo dia nahatsikaritra ny mpandeha fiaran-dalamby BART [Bay Area Rapid Transit] tao San Francisco, California fa tsy mandeha ny findainy. Ny ampitso maraina dia nandeha ny tsaho fa tsy nopihana novonoina ny fitaovana, ary tamin'ny folo ny BART no namoaka fanambarana (efa noankotrihina avy teo), nanamafy fa tsy maintsy nopihana ny fitaovam-piseraserana tao amin'ny metro ho fiomanana amin'ny fihetsiketseham-panoherana hiseho.
Tamin'ny volana lasa teo dia nahavita nanakatona ny garan'ny BART ny mpikatroka tao an-toerana ho fanoherana ny nitifirana an'i Charles Hill (tandremo: sary mampihoron-koditra) sy i Oscar Grant.
Niteraka fahavinirana teo amin'ny vondrona sy mpikatroka miaro ny zon'olombelona ny nataon'ny BART, tezitra ihany koa ny Anonymous, izay niasa avy hatrany hanao hetsika tao amin'ny Twitter amin'ny alalan'ny #opBART. Ny alahady, novan-dry zareo endrika ny mybart.org. Nandritra izany fotoana izany, nokasaina ny hanaovana fihetsiketseham-panoherana ny alatsinainy 15 aogositra.
Raha nandeha ary noho izany ny fihetsiketseham-panoherana tao San Francisco dia nahazo endrika ihany koa ny fiaraha-mientana Ejipsiana avy ao amin'ny Twitter. Nakorintsana ny tenifototra #MuBARTek ho fampitahan'ny Ejipsiana ny nataon'ny BART tamin'ny nataon'ny filoha ejipsiana teo aloha teo aloha Mubarak nanapika ny fitaovana fampiseraserana aterineto handemena ny fihetsiketsehana.
Tarek Amr (@gr33ndata) nanazava ny tenifototra tamin'ny mpamakiny:
Raha toa mbola lasan'eritreritra ianao, eny, manana tenifototra maneso ny Ejipsiana izao tamin'ny fampitambarana ny #opBART tamin'ny vazivazy #Mubarak , ary dia lasa antsoina hoe #muBARTek
Nanampy i Ahmed Kamal:
#opBART io tenifototra io no ironan'ny besinimaro ary tsy manoratra amin'io afa-tsy ny Ejipsiana ihany. Fiarahabana maraina ho fihomehezana 😀
@magyj nampitaha ny fitantaran'ny fampahalalam-baovao ny fihetsiketseham-panoherana ny ataon'ny BART sy ny nataon'ny haino aman-jerim-panjakana Ejipsiana tamin'ny Janoary:
#OPBart tsy misy na inona na inona mandeha ao amin'ny CNN momba ny tao #SanFran !!! Mitovy amin'ny fampitam-baovao Ejipsiana tamin'ny #jan25 #MuBARTek
Ho fanasian-tsira [kivazivazy] kely ny resaka nanamarika ny anjara toeran'i Mubarak i Gigi Ibrahim (@GSquare86) :
Zavabita lehibe nataon'i Mubarak: nampiditra ny enti-milaza “mi-mubarak” tao amin'ny rakibolana anglisy midika hoe manindry sy manapaka ny fifandraisan'ny olona #MuBARTek #opBART
Ho valin'ny fanontanian'i @3arabawy miaraka amin'ny hanihany raha toa manana tambazotra any San Francisco ny mpanome tolotra finday ejipsiana Mobinil, I @SalmaNoshokaty no nanamarika ny gafin'ny orinasam-pinday hafa malaza, “Ho fanazavana ny zava-nitranga farany, matoky aho fa manana i @VodafoneEgypt !”
Avy any Etazonia i Zeynep Tufekci (@techsoc) mamazivazy:
Amin'ny manaraka ny BART handefa rameva sy jiolahimboto ao amin'ny garan'i Embarcadero. #OpBart #MuBARTek
Nanapa-kevitra tsy amin'ahiahy amin'ny tsy misy dikany ary amin'ny fandikan-dalàna ny BART hanakatona ny fampiasana finday ary dia mamaly tafahoatra ny fihetseham-pon'ny olona avy eo? Mamirapiratra e. #OpBart
Ary novalian'i Rasha Abdulla :
@techsoc Averina indray, ilainay hatao ho heloka bevava ny fanakanana ny fifandraisana an-tserasera sy ny finday #OpBart #FreeSpeech